အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း - Hello Sayarwon - Page 1 of 34
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း သည် အလှအပထိန်းသိမ်းခြင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်သလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
မျက်နှာကို သန့်စင်တာ၊ မျက်နှာသစ်တာက နေ့စဉ်လုပ်နေကျ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး အလေ့အထ တစ်ရပ်ပါ။ ဒီလို မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနေတဲ့ ရေရဲ့ အပူချိန်ပေါ်လိုက်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုလေးတွေ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုရေနဲ့ သစ်သစ် မျက်နှာက သစ်ပြီးသွားတာ မှန်ပေမယ့် မျက်နှာသစ်တဲ့ ရေအပူချိန် မှန်မှန်နဲ့ သစ်တာကတော့ မျက်နှာအရေပြားကို အကျိုးကျေးဇူး များစေနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ မနက်နိုးတဲ့အခါ ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးလေးတွေရနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ရေအေးအေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ ရလား ...... လူအတော်များများ လက်ခံထားတာက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေ စင်ကြယ်စေဖို့ဆိုရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ သစ်ရမယ်လို့ပေါ့။ ရေနွေးနဲ့ သစ်တာက အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိသလို မိုးလင်းလာတဲ့အခါ ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တာကလည်း အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ရေနွေးနွေး နဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ ရသလို ရေအေးအေးနဲ့လည်း […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 29/09/2021
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ပုစွန်စာရွက် ကပေးတဲ့ အလှအပ တွေက ဘာတွေများလဲ ......... ပုစွန်စာရွက် လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘယာကြော်ထဲမှာ ထည့်ကြော်ထားပြီး ခပ်ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ စားကောင်းတာကို ပြေးမြင်မယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ အာလူးလေးနဲ့ ကြော်စားတာပါ။ စားလိုက်ရင် သဘာဝရဲ့ မြေသင်းနံ့လို ခပ်သင်းသင်း ရနံ့လေးကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ စားလို့လည်း ကောင်းသလို အရသာလေးလည်း တော်တော် ရှိတာပါ။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများသလို အလှအပအတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတဲ့ ပုစွန်စာရွက်လေးက အလှအပကို ဘယ်လို အားဖြည့်ပေးသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ပုစွန်စာရွက်က ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲ..... ပုစွန်စာရွက် ကို တော်တော်များများ မြင်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အရွက်စိမ်းရင့်ရင့် ချွန်ချွန်လေးနဲ့ အရိုးလေးက ခပ်ပွပွလေးပါ။ အပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေ ပွင့်တတ်ပြီး မြေမှာ […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 21/09/2021
သာကူက စားလို့ ကောင်းသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး များပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သာကူက လေဒီလေးတို့ရဲ့ အလှအပ အတွက်လည်း အခုလို ထောက်ပံ့ပေးပါသေးတယ်။ သာကူကပေးတဲ့ အလှအပ က ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ သာကူမှာ ဘာတွေပါ........ သာကူမှာ အပင်ကနေရတဲ့ ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ကစီဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။ သာကူကပေးတဲ့ အလှအပ စားကောင်းလှတဲ့ သာကူလေးက အလှအပအတွက်လည်း အခုလိုလေး ထောက်ပံ့ပေးပါသေးတယ်။ ဝက်ခြံ သက်သာစေတယ် မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေ သက်သာစေဖို့အတွက်လည်း သာကူကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ သာကူ အဖြူကို ရေနဲ့ရောပြီး အနှစ်ရအောင် ကြိတ်ပါ။ ရလာတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပြီး ခြောက်အောင် ထားပေးပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အထိ ထားပေးပါ။ ပြီးရင် […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 17/08/2021
အခုလို ကိုဗစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ မေမေတိုင်း စိတ်ပူနေမယ့် ကိစ္စလေးက ကိုယ့်ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ ဖျားနာမှာကို ဟုတ်…. မေမေတို့က ကိုယ်ကိုတိုင်အတွက်ထက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစားတတ်သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း မိခင်ဆိုတာ သားသမီးတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရာလို့ ဆိုကြတာပေါ့။ အခုကာလမှာ မေမေတိုင်း စိတ်ပူနေမယ့် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုက ကင်းဝေးပြီး သားသားမီးမီးတို့ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝ ကျန်းမာနေအောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးရမလဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က လူကြီးတွေမှာတင် မဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေမှာပါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်နေပြီး ကလေးတွေမှာ သိပ်မပြင်းထန်တာမျိုးပဲ ကွာပါတယ်။ ဒီလိုကာလမှာ ချစ်မဝတဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို ကျန်းမာနေစေဖို့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းက ဘေဘီလေး ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝနေစေဖို့အတွက် အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် ပြင်ဆင်ပေးတာပါ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘေဘီလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးကြမလဲ………. ကိုဗစ်ကာလမှာ […]
COVID-19 ကပ်ရောဂါက နေ့စဉ်တိုင်းမှာ စိန်ခေါ်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ မေးခွန်းများစွာကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ နေ့စဉ်တိုင်း ကိုဗစ်ကြောင့် ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း မနည်းမနောဖြစ်နေမှာပါ။ဒီလို များပြားလှတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 Delta မျိုးစိတ် အကြောင်းလည်း ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီမျိုးစိတ်က နောက်ထပ် ကိုဗစ်လှိုင်း တစ်ခုကို ဖြစ်စေမလား။ နောက်ထပ် lockdown တွေ လာမလား။ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေကရော ဒီပိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီသိချင်နေမယ့် အချက်လေးတွေကို အခုဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ဆိုတာ ဘာလဲ…… COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ကို B.1.617.2 လို့ သိကြပါတယ်။ အခြားမျိုးစိတ်တွေထက် ကူးစက်မှုနှုန်း မြန်တယ်လို့ CDC က ဆိုပါတယ်။ […]
ကိုဗစ်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့အခါ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုက အာဟာရ ပြည့်ဝမျှတအောင် စားသောက်တာပါ။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အများစုက အစားအသောက် သေချာ ဂရုစိုက်ဖို့ကို မေ့နေတတ်ပြီး ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဗီတာမင် အားဆေးတွေကိုပဲ အဓိကသောက်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ကိုဗစ်ကို အနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက် အာဟာရပြည့်ဝဖို့ အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဗစ် ဖြစ်နေပြီလို့ သံသယ ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုဗစ်ဖြစ်နေရင် ဖြစ်ဖြစ် အခုလိုလေး အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားသောက်ကြဖို့ ပြောပါရစေ။ ကိုဗစ်ရောဂါ ခံစားနေရသူတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် အာဟာရ ပြည့်ဝမှုက ကိုဗစ် ခံစားနေရချိန်မှာ ခံနိုင်ရည် ရှိစေဖို့ရော ရောဂါကို ခုခံဖို့ပါ အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာချိန်မှာလည်း အတော်လေး အရေးပါပါတယ်။ ကိုဗစ် ရောဂါ […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 10/09/2021
အရေပြားက လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွင်ပြင်ပေါ် အများကြီး သက်ရောက်နေတာမို့ အသားအရေက ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ အရာ တစ်ခု လို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ ဒီလို အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု ပစ္စည်းက မိမိ အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ရွေးချယ်မိဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလိုရွေးချယ်မှု မှားတဲ့အခါ အရေပြားကို ထိခိုက်စေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတ်။ တစ်ခါတလေ အသားအရေထိန်းပစ္စည်းက ကိုယ့်အသားအရေ အမျိုးအစားအတွက်ပဲ ထုတ်ထားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ သက်သာမသွားဘဲ အဖုအပိမ့်တွေ ထပ်ထွက်လာတဲ့အခါမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ မတည့်တာများလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်မိတဲ့ အခိုက်အတန့် လေဒီလေးတိုင်း လိုလိုမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အသားအရေထိန်းတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခုခု သုံးတဲ့အခါ အရေပြားပေါ်မှာ အဖုအပိမ့်လေးတွေ ထပ်ထွက်လာတာဟာ မတည့်လို့လား ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို သေချာလေး သိနိုင်စေဖို့ ပြောပြပေးပါရစေ။ အသားအရေ […]
Dr. Phyo Wai Lynn မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 17/02/2021
တန်ကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာ ဝန်းကျင်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နဲ့ AstraZeneca ကုမ္ပဏီ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ Oxford/AstraZeneca ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဗြိတိန်နိုင်ငံက အသုံးပြုခွင့် ထောက်ခံချက် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Oxford/AstraZeneca ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုမှု ပိုမိုတွင်ကျယ်လာဖို့ရှိနေပြီး နိုင်ငံတကာမှာလည်း ခွင့်ပြုချက်တွေ ဆက်လက်ရရှိလာဖို့ လမ်းပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း ပိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတော့မှာပါ။ ဗြိတိန်အစိုးရဟာ နိုင်ငံသား သန်း ၅၀ အတွက် Oxford/AstraZeneca ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အလုံးရေသန်း ၁၀၀ မှာယူထားပါတယ်။ အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်မှာ စတင်ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အထက် နိုင်ငံသားတိုင်းကို ထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် […]
COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးရဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကနေ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေက မသေးလှပါဘူး။ ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာတွေကို ပြုစုကုသရင်း ကိုယ်တိုင်လည်း မကူးစက်အောင် သတိကြီးကြီးထားပြီး ကာကွယ်လုပ်ကိုင်နေရတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံလိုက်ရတာဟာ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းကို ယုတ်လျော့သွားစေတာဖြစ်ပြီးတော့ လူနာတွေအတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ရော ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါ နစ်နာမှုတစ်ရပ်မဟုတ်လား။ ခုလည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Occupational & Environmental Medicine ကျန်းမာရေးစာစောင်ကြီးက ကိုဗစ်ကာလမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာချက်ရဲ့ အဆိုအရတော့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ကိုဗစ်ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ခြေ ၇ ဆ ပိုမြင့်မားပါတယ်တဲ့။ ယခုလေ့လာချက်ဟာ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေအပြင်၊ ကျန်းမာရေးအကူဝန်ထမ်းတွေ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ (လူနာတင်ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အထွေထွေ အကူဝန်ထမ်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်း လေ့လာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက […]
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးကိစ္စဟာ အကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတိပေးစကားဆိုလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ Amnesty International၊ Global Justice Now၊ Free the Vaccine၊ the Yunus Centre၊ Frontline AIDS၊ Oxfam၊ SumOfUs၊ UNAIDS စတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ စုစည်းထားတဲ့ Vaccine Alliance က အဆိုပါသတိပေးချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်နေသလို ကာကွယ်ဆေးဖြန့့်ချိရေးအပိုင်းဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့ သတိပေးလိုက်တာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ ဝင်ငွေအလယ်အလတ် တိုင်းပြည်တွေက လူဦးရေ ၉၀% လောက်ဟာ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးရနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါဒေသတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးလုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့ဆိုရင် ၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ စောင့်ဆိုင်းရလိမ့်မယ်လို့ […]
Dr. Phyo Wai Lynn မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 28/12/2020
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ ပင်လယ်စာဈေးကနေစတင်ခဲ့တဲ COVID-19 ရောဂါဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာဆိုးတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဟာ SARS နွယ်ဝင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ လင်းနို့တွေကနေ စတင်ပေါက်ပွားတယ်လို့ ယူဆခြင်းခံထားရပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ထူးဆန်းတဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ အဆိုပါရောဂါကို COVID-19 လို့ နာမည်ပေးခဲ့ကြသလို အလွယ်တကူ ဝူဟန်ကိုရိုနာလို့လည်း ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါကပ်ဘေးဟာ လူဦးရေ ၁၁ သန်းကျော်နေထိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ ပင်လယ်စာဈေးတစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ လက်ရှိအချိန်အထိ ယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အီတလီ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ CDC […]
အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း ကျွမ်းကျင်သူ